Photoshop CC dia mivoaka amin'ny Adobe MAX miaraka amina fitaovana roa mahatalanjona | Famoronana an-tserasera
Ireo fiasa vaovao roa lehibe indrindra amin'ny Photoshop CC ao amin'ny Adobe MAX
Omaly dia efa nanambara vaovao maro mifandraika amin'ny Adobe MAX izahay, ny hetsika misy ny orinasa lehibe amin'ny famolavolana sy fanovana amin'ny alàlan'ny solosaina na fitaovana finday. Nampahafantatra ny tenany ihany koa izy ireo ireo fiasa vaovao roa lehibe indrindra amin'ny Photoshop CC.
Amin'ny lafiny iray dia manana ny fitaovana fifantenana Adobe Sensei isika, mifandraika amin'ny faharanitan-tsaina artifisialy, ary Fomba fampifangaroana mivantana na mivantana. Fitaovana vaovao roa hanome elatra an'ireo tompona famandrihana Adobe Photoshop CC isam-bolana.
Omaly izahay dia niresaka momba ny Premiere Rush, toy ny fampiharana vaovao natokana ho an'ny horonan-tsary, ary ny haingana fahatongavan'i Adobe Photoshop CC (eny, ny kinova PC feno) ho an'ny iPads; na dia ny toetrany rehetra aza ho tonga amin'ny fanavaozam-baovao avy izy ireo.
Alohan'ny hiresahana ireo zava-baovao roa lehibe, afaka milaza ihany koa izahay fa afaka manao izany ianao izao tsindrio indroa amin'ny lahatsoratra iray hanovana azy ary avy eo ampiasao ny fitaovana an-tsoratra hanaovana fanovana. Na ny mizana nomena dia alefa amin'ny alàlan'ny alàlan'ny default, na azonao atao ny mamafa fa tsy misy mitazona ny safidy na misy ny fanalahidy.
Raha ny Adobe Sensei, Adobe nampiseho izany tamin'ny tsindry iray, ilay vaovao fitaovana misafidy sensei Afaka mamantatra ho azy ny zavatra tadiavintsika izy io. Izany hoe, tsindrio ny orsa isika ary voafantina tanteraka ny endriny iray manontolo.
Ny iray amin'ireo fitaovana manaitra indrindra dia ny fomba fampifangaroana mivantana izay naseho tao amin'ny Adobe MAX ho an'ny Photoshop CC. Miaraka amin'ny avelao ny pointer totozy amin'ny sasany amin'ireo maody ny fusion ary ny fomba nanavaozana azy ireo tamin'ny fotoana tena izy, dia naharesy ny tehaka nataon'ny mpanatrika.
Ny fikasan'ny ny fanavaozana vaovao an'ny Adobe Photoshop CC dia ny fitondrana ny famoronana amin'ny ambaratonga hafa ary hitsitsiana fotoana iasana amin'ireo lahasa fifantina toy ny fahasambaran'ny Adobe Sensei. Izao vao mila tonga.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Ireo fiasa vaovao roa lehibe indrindra amin'ny Photoshop CC ao amin'ny Adobe MAX
Apple dia manome ny emoji bagel hampifaly ny mpitsikera